Kpop / News
တရုတျနိုငျငံရဲ့ အကြျောကွားဆုံးနှငျ့အခမျြးသာဆုံးမငျးသမီးမြားထဲမှတဈ ဦး ကို အပွီးတိုငျ ဖကျြပဈလိုကျပွီး ဒီကိစ်စတှငျ တရုတျအစိုးရကနောကျကှယျမှရှိနလေိမျ့မညျဟုယူဆထားကွပါတယျ၊
သူမမှာ သနျးပေါငျးမြားစှာသော ပရိတျသတျမြားရှိသလို ဘီလီယံပေါငျးမြားစှာလညျး ပိုငျဆိုငျပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဘကေငျြးက မငျးသမီးZhao Wei ကို ရုပျရှငျသမိုငျးကနေ အပွီးတိုငျ ဖကျြပဈလိုကျပွီး ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာတော့ မပွောပွထားပါဘူး၊
Zhao ရဲ့ နာမညျဟာ ထပျမံ မရှငျသနျနိုငျတော့ပါဘူး၊ အငျတာနကျပျေါက သူမနဲ့ပတျသကျတဲ့အကွောငျးတှအေားလုံး ဖကျြခခြံလိုကျရပါတယျ၊
သူမရဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှနေဲ့ သူမပါဝငျတဲ့ show တှအေကုနျလုံး တရုတျ အှနျလိုငျးဝကျဆိုဒျ တှမှော ဖကျြခခြံခဲ့ရပါတယျ၊ သူမကို အှနျလိုငျး ကွျောငွာအဖွဈနဲ့တောငျမတှနေို့ငျတော့ပါဘူး၊
Zhao Wei at the Venice Film Festival on September 10, 2016. Picture: Ian Gavan/Getty Images for Jaeger-LeCoultre
Zhao Wei ဟာ 1900 နောကျပိုငျးတှငျ တရုတျရဲ့ နာမညျကွီးဇာတျလမျးဖွဈတဲ့ My Fair Princess မှာ စတငျကြျောကွားခဲ့ပွီး Aအဆငျ့ မငျးသမီးတလကျဖွဈလာပွီး အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ ဒါရိုကျတာ၊ Pop အဆိုတျော၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ၊
ဥက်ကဌ Deng Xiaopingရဲ့ တရုတျ အဖှငျ့မူဝါဒနဲ့ ပုဂ်ဂလိကစီးပှားရေးလုပျငနျးတှရေဲ့ မကျလုံးတှကေို လကျခံခဲ့ရာမှ မငျးသမီးZhao Weiဟာ ခမျြးသာလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ၊
သို့သျော သူမရဲ့ စီးပှားရေးအငျပါယာဟာ ရှီကငျြ့ဖငျြလကျထကျတှငျဒုက်ခရောကျခဲ့ရပါတယျ၊ Zhao သညျ ၂၀၁၆ ခုနှဈရုပျရှငျတှငျခေါငျးဆောငျမငျးသားအဖွဈသရုပျဆောငျရနျ ထိုငျဝမျလူမြိုးသရုပျဆောငျတဈ ဦး ကို ငှားရမျး ခဲ့ခွငျးကွောငျ့မြိုးခဈြစိတျမရှိ သူဟု စှပျစှဲခံခဲ့ရပွီး ပကေငျြးကလညျး ထိုရှေးခယျြမှုကို ဆနျ့ကငျြခဲ့ပါတယျ၊
သိပျမကွာခငျမှာပဲ Zhao ရဲ့စီးပှားရေး ဝယျယူမှု တှဟော စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားနှငျ့အခှနျစိစဈခွငျးအတှကျ မကျြစိကစြရာဖွဈခဲ့ပါတယျ၊ပွီးခဲ့သညျ့လကသူပိုငျဆိုငျသောအဂေငျြစီရဲ့မငျးသား တဈဦးဖွဈသော Zhang Zhehan သညျ ဂပြနျသို့အလညျအပတျသှားနစေဉျ Yasukuniစဈသင်ျခြိုငျး၌ selfie ရိုကျခဲ့တာကွောငျ့ သူမအဂေငျြစီဟာ အမြိုးသားရေးနဲ့ ပတျသတျပွီး စှပျစှဲခံခဲ့ရပွနျပါတယျ၊
Zhao Wei at Hollywood’s TLC Chinese Theater in 2015. Picture: Todd Williamson/Getty Images for Sun Seven Stars Media
စနနေတှေ့ငျ Zhao ဟာ ကိုယျပိုငျဂကျြလယောဉျဖွငျ့တိုငျးပွညျမှထှကျသှားပွီးသူမနှငျ့သူမခငျပှနျး Huang Youlong တို့ပိုငျဆိုငျသောစပဈြဥယြာဉျရှိတဲ့ ပွငျသဈ ရှိ Bordeaux လဆေိပျကိုရောကျခဲ့ကွောငျး တရုတျသတငျးဌာနက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ၊
ယခု Zhao ဟာ နာမညျကွီးမြားနှငျ့ဘီလြံနာမြားအားတရုတျကှနျမွူနဈပါတီက နှိမျနငျးမှုရဲ့သားကောငျဖွဈ နပေုံရပါတယျ၊
ဘကေငျြးဟာ ပုဂ်ဂိုလျရေးကိုးကှယျမှုတှကေို စိုးရိမျနပေါတယျ၊ အနညျးဆုံးတော့ ရှီကငျြ့ဖငျြကို တော့ ဦးတညျတာမြိုးမရှိသေးပါဘူး၊
ရှီကငျြ့ဖငျြရဲ့ အတှေးအချေါတှကေို ကြောငျးတိုငျးမှာ မဖွဈမနသေငျကွားနရေပွီး သူ့ရဲ့ တိုကျတှနျးမှုတှဟော နိုငျငံ သတငျးဌာနအားလုံးကို ထိနျးခြုပျထားပါတယျ၊
ဒါပမေယျ့ အနုပညာရှငျတှရေဲ့ နထေိုငျမှုဘဝနဲ့ လုပျဆောငျခကျြတှဟော ဆိုရှယျမီဒီယာပျေါမှာ ပိုပွီး ကြျောကွားပါတယျ၊ အနုပညာရှငျပရိတျသတျ‌တှရေဲ့ အနုပညာ ခံစားနားလညျမှုဟာ ရှီကငျြ့ဖငျြစဉျးစာထားတဲ့တရုတျသဘောသဘာဝတှနေဲ့ ကိုကျညီမှုမရှိပါဘူး၊
သောကွာနတှေ့ငျဘဂေငျြးရဲ့Cyberspace အုပျခြုပျရေးအဂေငျြစီက ပရိတျသတျအသိုငျးအဝိုငျးမြားနှငျ့“ ပွဿနာမြားကိုဖွရှေငျးရနျ” ရညျရှယျသောဆိုရှယျမီဒီယာနှငျ့အငျတာနကျအျောပရတောမြားအတှကျညှနျကွားခကျြမြားကိုထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ၊
ရညျရှယျခကျြက‌ တော့ “ နိုငျငံရေးနှငျ့အတှေးအချေါလုံခွုံမှုရှိစသေညျ့ဆိုကျဘာနှငျ့ အရှုပျအရှငျးကငျးသောအငျတာနကျကိုဖနျတီးရနျ” ဖွဈပါတယျ၊
အနုပညာရှငျတှရေဲ့ ကြျောကွားမှုကို အဆငျ့သတျမှတျလို့မရတော့ပါဘူး၊
အနုပညာ အဂေငျြစီတှကေ ကှနျမွူနဈပါတီကှပျကဲမှုတှကေို တငျပွရပါတယျ၊
Fan Club မြားဟာ လိုငျစငျနှငျ့တရားဝငျခှငျ့ပွုခကျြရှိရမညျဖွဈပါတယျ၊
မတူညီတဲ့ ပရိတျသတျ တှကွေားက မညျသညျ့သဘောထားကှဲပွားမှုကိုမဆို ဆငျဆာဖွတျခံရမှာဖွဈပါတယျ၊
စညျးမဉျြးစညျးကမျး‌ ဖောကျဖကျြမှုသညျ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးအခွခေံလူ့အဖှဲ့အစညျးတဈရပျထူထောငျရေးအတှကျ မူဝါဒလမျးညှနျခကျြ၊ စာရိတ်တစံနှုနျးမြားကို “ဥပဒစေံနှုနျးမြား” အဖွဈသတျမှတျရနျပွဋ်ဌာနျးထားသော မူဝါဒလမျးညှနျခကျြ တဈခုထုတျပွနျထားခွငျးကိုလိုကျနာခွငျးပငျဖွဈပါတယျ၊
တရုတျအမြိုးသားရဒေီယိုနှငျ့ရုပျမွငျသံကွားကွီးကွပျကှပျကဲမှုအဖှဲ့က ၂၀၁၈ ၌ အကငျြ့စာရိတ်တမမွငျ့မွတျ၊ အနှဈသာရမရှိ၊ အောကျတနျးကညြဈညမျးသော သို့မဟုတျ အယူဝါဒအဆငျ့အတနျးနိမျ့ကသြော သရုပျဆောငျမြားကို နှငျထုတျရနျ အမိနျ့ပေးခဲ့ပါတယျ၊
ပွဈခကျြရှိပွီး ပွဿနာအရှုပျအရှငျးမြားကာ ကိုယျကငျြ့စာရိတ်တမကောငျးတဲ့ သရုပျဆောငျတှအေကုနျလုံးကို ဖယျရှား မှာဖွဈပါတယျ၊
ယခုတဈပတျတှငျကှနျမွူနဈပါတီထိနျးခြုပျထားသော Global Times က Zhao အား“ နှဈပေါငျးမြားစှာအရှုပျတျောပုံအမြိုးမြိုး၌ ဝငျရောကျစှကျဖကျခဲ့တယျ” လို့ စှပျစှဲခဲ့ပါတယျ၊သူမရဲ့အကွောငျးအရာမြားကို ဖကျြပဈခွငျးအတှကျတရားဝငျအကွောငျးပွခကျြမရှိကွောငျးကိုလညျး ဝနျခံခဲ့ပါတယျ၊
Zhao Wei at the 73rd Venice Film Festival in 2016. Picture: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
“သူမဟာ ကြျောကွားတဲ့အပွငျ အပွငျ Zhao ဟာတရားစှဲဆိုမှုတှနေဲ့ပတျခြာလညျ‌ နတေဲ့သနျးကွှယျသူဌေးတဈဦး အဖွဈလညျးလူသိမြားပါတယျ” လို့ရေးထားပါတယျ၊“ ၂၀၀၁ ခုနှဈအစောပိုငျးတှငျ Zhao ဟာ ဂပြနျစဈတပျအလံပါ ဝတျစုံကိုလူသိရှငျကွား ၀တျဆငျခဲ့သောကွောငျ့ဝဖေနျမှုမြားစှာကို ရရှိခဲ့ပါတယျ၊
မငျးသား Zhan Zhehan ဟာလညျး ဂပြနျနိုငျငံရှိ နာမညျဆိုးဖွငျ့ကြျောကွားသော Yasukuni Shrineစဈသင်ျခြိုငျးမှာ ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ပွီးနောကျ Weibo အပါအဝငျသူရဲ့အကောငျ့မြားနှငျ့အလုပျမြားအားလုံးနဲ့ ပတျသတျတဲ့ လူမှုမီဒီယာပလကျဖောငျးအသီးသီးဟာ ပိတျပငျခံခဲ့ရပါတယျ၊
Zhang သညျပွီးခဲ့သညျ့လကအလားတူ ဖကျြသိမျးမှုကိုခံရပွီးသူမ အကွောငျးနဲ့ပတျသကျတဲ့ အှနျလိုငျး‌ ပျေါက ဖျောပွခကျြအားလုံးကိုဖကျြပဈခံခဲ့ရပါတယျ၊
သောကွာနကေ့မငျးသမီး Zheng Shuang သညျပကေငျြးကိုစျောကားခဲ့ပါတယျ၊ သူမဟာ အခှနျရှောငျမှုဖွငျ့စှပျစှဲခံရပွီးဒဏျငှဒေျေါလာ ၆၃ သနျးပေးဆောငျရနျအမိနျ့ပေးခခြံရပါတယျ၊ သူမသာ ဒဏျငှပေေးဆောငျရငျသူမကိုစုံစမျးစဈဆေးမှာမဟုတျသလို သူမရဲ့ ပရိုဖိုငျကိုပငျထိနျးသိမျးထားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ၊
ပွီးခဲ့သညျ့နှဈ နှောငျးပိုငျးကသူမရဲ့ ကိုယျပိုငျဘဝအ‌ကွောငျး ကမ်ဘာအနှံ့ ပြံနှံ့ခဲ့ပွီးနောကျ Zheng ရဲ့အလုပျအကိုငျအဆုံးသတျခဲ့ရပါတယျ၊ သူမရဲ့လကျတှဲဖျောဟောငျးကသူမကိုအမရေိကနျမှာအငှားကိုယျဝနျဆောငျကလေးနှဈ ဦးအား စှနျ့ပဈခဲ့တယျလို့စှပျစှဲခဲ့ပါတယျ၊ ထို့နောကျ Zheng သညျလူအမြားရှမှေ့ လေးလကွာပြောကျကှယျသှားပါတယျ၊
နာမညျကွီးအဆိုတျော Huo Zhun ဟာလညျး မဖှယျမရာအပွုအမူကွောငျ့လူသိရှငျကွားတိုကျခိုကျခံရပွီးနောကျ မကွာသေးမီကရာထူးမှနုတျထှကျခဲ့ပါတယျ၊ ယခုလအစောပိုငျးတှငျ တရုတျ-ကနဒေါအဆိုတျော Kris Wu သညျအဓမ်မပွုကငျြ့မှုနှငျ့အသကျမပွညျ့သေးသောလိငျပိုငျးဆိုငျရာစှပျစှဲခကျြမြားဖွငျ့တရားစှဲခံနရေပါတယျ၊
အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျ“ fan circle member” ဖွဈသူ Eunice Zhang ကသူမဟာ သူမရဲ့ idols မြားကိုခုခံကာကှယျရနျအတှကျ နာရီပေါငျးမြားစှာအခြိနျဖွုနျးလရှေိ့တယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ၊
Kris Wu at the Paris Fashion Week 2020. Picture: Pascal Le Segretain/Getty Images
“ အရငျတုနျးကငါ့ရဲ့ idol တှကေ ပစ်စညျးသဈတှကွေညောရငျ (သူတို့ထုတျကုနျတှဝေယျဖို့) ငါ့ပိုကျဆံအကုနျလုံးကို သုံးလရှေိ့ပါတယျ” လို့သူမ ပွောခဲ့တယျ၊ “ဒါပမေယျ့အခုငါအသုံးဝငျတဲ့ထုတျကုနျတှကေိုပဲ ဝယျလိုကျ တော့တယျ”
တရုတျဆငျဆာအဖှဲ့က အရာအား လုံးအတှကျ ကိုသသေခြောခြာကိုစီစဉျနကွေပါတယျ၊
အစိုးရက ထိနျးခြုပျထားသော နိုငျငံပိုငျမီဒီယာက နာမညျကြျောတဦးဖွဈလာစရေနျ” မွတေောငျမွှောကျပေးမညျ”၊”ကိုယျကငျြ့တရားကောငျးရမယျ”၊” လူမှုဆကျဆံရေးကောငျးမှနျတဲ့ သူတှဟော ဆုရမယျ” စတဲ့ သတငျးတှရေဲ့ လူသိမြားအောငျလုပျပါတယျ၊
ယခုလအစောပိုငျးကဘဏ်ဏာရေးရာဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေး၌ ဥက်ကဋ်ဌရှီကိုယျတိုငျကှနျမွူနဈတနျဖိုးအတှကျတရုတျရဲ့ကတိကဝတျကိုပွနျလညျဖျောပွခဲ့ပါတယျ၊သူက“ သာယာဝ‌ပွောခွငျးသညျလူအမြားစုရဲ့ ခမျြးသာခွငျးမဟုတျဘဲလူအနညျးငယျရဲ့ခမျြးသာခွငျး” ဖွဈပါတယျလို့ပွောပါတယျ၊
“သာယာဝပွောရေးဟာ ဆိုရှယျလဈစနဈရဲ့မရှိမဖွဈလိုအပျခကျြနှငျ့တရုတျပုံစံ ခတျေမီတိုးတကျရေးအတှကျ အရေးကွီးသောအင်ျဂါရပျတဈခုဖွဈတယ”လို့ ဆိုပါတယျ၊ “စြေးကှကျရှာဖှရေေးနဲ့တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးရဲ့အခွခေံမူတှကေိုလိုကျနာဖို့လိုတယျ၊ အဓိကငှကွေေးဆိုငျရာအန်တရာယျတှကေိုကာကှယျတားဆီးရေးနဲ့ဖွရှေငျးရေးကိုညှိနှိုငျးဖို့လိုတယျ”
ဥက်ကဋ်ဌရှီ က လှတျလပျသောဘီလြံနာမြားအားအန်တရာယျနှငျ့ညီမြှတယျလို့ ဆိုပါတယျ၊ အထူးသဖွငျ့ဆငျးရဲမှဲတမှေုကွီးထှားလာခွငျးဟာ ဆငျးရဲနှမျးပါးမှုပပြောကျရေးသတငျးကို သကျရောကျမှုတှရှေိလာစပေါတယျ၊
ဒါပမေယျ့စညျးစိမျဥစ်စာကွှယျဝမှုကို စီးပှားရေးရငျးနှီးမွှုပျနှံမှု၊ ပိုငျဆိုငျမှုနဲ့ထိနျးခြုပျမှုအပျေါတငျးကပျြတဲ့စညျးမဉျြးသဈတှခေမြှတျထားတဲ့ကှနျမွူနဈပါတီရဲ့အာဏာအတှကျ ခွိမျးခွောကျ‌မှုအဖွဈ မွငျနကွေပါတယျ၊
ဇူလိုငျလတှငျနညျးပညာကုမ်ပဏီ Tencent ပိုငျရှငျ Ma Huateng သညျ သှေးထိုးလှုံ့ဆျောမှု ကွောငျ့ဒျေါလာ ၈၂ ဘီလြံမှ ဒျေါလာ ၆၈ ဘီလြံသို့ကဆြငျးသှားတာ ကို တှမွေ့ငျရပါတယျ၊
သူတဈ ဦး တညျးမဟုတျပါဘူး၊ဘီလြံနာ Jack Ma ဟာ သူ့ရဲ့ Ant Group အားအမြားပွညျသူထံဝမြှေမှုကို တားဆီးခံရပွီးနောကျ လူထုဘဝမှပြောကျကှယျသှားခဲ့ပါတယျ၊ နညျးပညာကဏ်ဍတိုးတကျမှုကွီးထှားမှုကိုမတားဆီးနိုငျသောကွောငျ့ Ma သညျကှနျမွူနဈပါတီအားပွိုငျမှုမြားကိုမဝဖေနျဝံ့ဘဲထိုနှိမျနငျးမှုကိုပွုလုပျခဲ့ရပါတယျ၊
Jack Ma speaking duringaShanghai trade forum in 2018. Picture: Lintao Zhang/Getty Images
ဒါဟာအံ့သွစရာ မဟုတျပါဘူး၊ ဥက်ကဋ်ဌ ရှီ သညျ ၂၀၁၇ တှငျဒုတိယအကွိမျအာဏာပွနျရသောအခါ“ အလှနျအမငျးကွှယျဝမှု” ကိုကိုငျတှယျဖွရှေငျးရနျကတိပေးခဲ့ပါတယျ၊ သို့သျော“ ဝငျငှမြေားကိုအကြိုးသငျ့အကွောငျးသငျ့ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြား” ပွုလုပျရနျတရားဝငျကတိပွုရနျ ယခုလ ဗဟိုကျောမတီအစညျးအဝေးမတိုငျမီအထိကွာမွငျ့ခဲ့ပါတယျ၊
ဇူလိုငျလတှငျတရုတျစိုကျပြိုးရေးသူဌေးကွီး ဆှနျဒါဝူဟာ စကားမြားရနျဖွဈခွငျးနှငျ့ပွဿနာကိုလှုံ့ဆျောခွငျးတို့ဖွငျ့ထောငျဒဏျ ၁၈ နှဈခမြှတျခံခဲ့ရပါတယျ၊ သူဟာ ပိုငျဆိုငျမှုအငွငျးပှားခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောခဲ့ပါတယျ၊
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အချမ်းသာဆုံးမင်းသမီးများထဲမှတစ် ဦး ကို အပြီးတိုင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး ဒီကိစ္စတွင် တရုတ်အစိုးရကနောက်ကွယ်မှရှိနေလိမ့်မည်ဟုယူဆထားကြပါတယ်၊
သူမမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော ပရိတ်သတ်များရှိသလို ဘီလီယံပေါင်းများစွာလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘေကျင်းက မင်းသမီးZhao Wei ကို ရုပ်ရှင်သမိုင်းကနေ အပြီးတိုင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ မပြောပြထားပါဘူး၊
Zhao ရဲ့ နာမည်ဟာ ထပ်မံ မရှင်သန်နိုင်တော့ပါဘူး၊ အင်တာနက်ပေါ်က သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအားလုံး ဖျက်ချခံလိုက်ရပါတယ်၊
သူမရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ သူမပါဝင်တဲ့ show တွေအကုန်လုံး တရုတ် အွန်လိုင်းဝက်ဆိုဒ် တွေမှာ ဖျက်ချခံခဲ့ရပါတယ်၊ သူမကို အွန်လိုင်း ကြော်ငြာအဖြစ်နဲ့တောင်မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး၊
Zhao Wei ဟာ 1900 နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ My Fair Princess မှာ စတင်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး Aအဆင့် မင်းသမီးတလက်ဖြစ်လာပြီး အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ဒါရိုက်တာ၊ Pop အဆိုတော်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်၊
ဥက္ကဌ Deng Xiaopingရဲ့ တရုတ် အဖွင့်မူဝါဒနဲ့ ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ မက်လုံးတွေကို လက်ခံခဲ့ရာမှ မင်းသမီးZhao Weiဟာ ချမ်းသာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊
သို့သော် သူမရဲ့ စီးပွားရေးအင်ပါယာဟာ ရှီကျင့်ဖျင်လက်ထက်တွင်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါတယ်၊ Zhao သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရုပ်ရှင်တွင်ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန် ထိုင်ဝမ်လူမျိုးသရုပ်ဆောင်တစ် ဦး ကို ငှားရမ်း ခဲ့ခြင်းကြောင့်မျိုးချစ်စိတ်မရှိ သူဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရပြီး ပေကျင်းကလည်း ထိုရွေးချယ်မှုကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်၊
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Zhao ရဲ့စီးပွားရေး ဝယ်ယူမှု တွေဟာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အခွန်စိစစ်ခြင်းအတွက် မျက်စိကျစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ပြီးခဲ့သည့်လကသူပိုင်ဆိုင်သောအေဂျင်စီရဲ့မင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သော Zhang Zhehan သည် ဂျပန်သို့အလည်အပတ်သွားနေစဉ် Yasukuniစစ်သင်္ချိုင်း၌ selfie ရိုက်ခဲ့တာကြောင့် သူမအေဂျင်စီဟာ အမျိုးသားရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စွပ်စွဲခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်၊
စနေနေ့တွင် Zhao ဟာ ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ဖြင့်တိုင်းပြည်မှထွက်သွားပြီးသူမနှင့်သူမခင်ပွန်း Huang Youlong တို့ပိုင်ဆိုင်သောစပျစ်ဥယျာဉ်ရှိတဲ့ ပြင်သစ် ရှိ Bordeaux လေဆိပ်ကိုရောက်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်၊
ယခု Zhao ဟာ နာမည်ကြီးများနှင့်ဘီလျံနာများအားတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက နှိမ်နင်းမှုရဲ့သားကောင်ဖြစ် နေပုံရပါတယ်၊
ဘေကျင်းဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုတွေကို စိုးရိမ်နေပါတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့ ရှီကျင့်ဖျင်ကို တော့ ဦးတည်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး၊
ရှီကျင့်ဖျင်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ကျောင်းတိုင်းမှာ မဖြစ်မနေသင်ကြားနေရပြီး သူ့ရဲ့ တိုက်တွန်းမှုတွေဟာ နိုင်ငံ သတင်းဌာနအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် အနုပညာရှင်တွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘဝနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ ပိုပြီး ကျော်ကြားပါတယ်၊ အနုပညာရှင်ပရိတ်သတ်‌တွေရဲ့ အနုပညာ ခံစားနားလည်မှုဟာ ရှီကျင့်ဖျင်စဉ်းစာထားတဲ့တရုတ်သဘောသဘာဝတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး၊
သောကြာနေ့တွင်ဘေဂျင်းရဲ့Cyberspace အုပ်ချုပ်ရေးအေဂျင်စီက ပရိတ်သတ်အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်“ ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်” ရည်ရွယ်သောဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အင်တာနက်အော်ပရေတာများအတွက်ညွှန်ကြားချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်၊
ရည်ရွယ်ချက်က‌ တော့ “ နိုင်ငံရေးနှင့်အတွေးအခေါ်လုံခြုံမှုရှိစေသည့်ဆိုက်ဘာနှင့် အရှုပ်အရှင်းကင်းသောအင်တာနက်ကိုဖန်တီးရန်” ဖြစ်ပါတယ်၊
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ကျော်ကြားမှုကို အဆင့်သတ်မှတ်လို့မရတော့ပါဘူး၊
အနုပညာ အေဂျင်စီတွေက ကွန်မြူနစ်ပါတီကွပ်ကဲမှုတွေကို တင်ပြရပါတယ်၊
Fan Club များဟာ လိုင်စင်နှင့်တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရှိရမည်ဖြစ်ပါတယ်၊
မတူညီတဲ့ ပရိတ်သတ် တွေကြားက မည်သည့်သဘောထားကွဲပြားမှုကိုမဆို ဆင်ဆာဖြတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်၊
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း‌ ဖောက်ဖျက်မှုသည် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ထူထောင်ရေးအတွက် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်၊ စာရိတ္တစံနှုန်းများကို “ဥပဒေစံနှုန်းများ” အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ပြဋ္ဌာန်းထားသော မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက် တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားခြင်းကိုလိုက်နာခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်၊
တရုတ်အမျိုးသားရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့က ၂၀၁၈ ၌ အကျင့်စာရိတ္တမမြင့်မြတ်၊ အနှစ်သာရမရှိ၊ အောက်တန်းကျညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် အယူဝါဒအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသော သရုပ်ဆောင်များကို နှင်ထုတ်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်၊
ပြစ်ချက်ရှိပြီး ပြဿနာအရှုပ်အရှင်းများကာ ကိုယ်ကျင့်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေအကုန်လုံးကို ဖယ်ရှား မှာဖြစ်ပါတယ်၊
ယခုတစ်ပတ်တွင်ကွန်မြူနစ်ပါတီထိန်းချုပ်ထားသော Global Times က Zhao အား“ နှစ်ပေါင်းများစွာအရှုပ်တော်ပုံအမျိုးမျိုး၌ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့တယ်” လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်၊သူမရဲ့အကြောင်းအရာများကို ဖျက်ပစ်ခြင်းအတွက်တရားဝင်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းကိုလည်း ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်၊
“သူမဟာ ကျော်ကြားတဲ့အပြင် အပြင် Zhao ဟာတရားစွဲဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်ချာလည်‌ နေတဲ့သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦး အဖြစ်လည်းလူသိများပါတယ်” လို့ရေးထားပါတယ်၊“ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် Zhao ဟာ ဂျပန်စစ်တပ်အလံပါ ဝတ်စုံကိုလူသိရှင်ကြား ၀တ်ဆင်ခဲ့သောကြောင့်ဝေဖန်မှုများစွာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်၊
မင်းသား Zhan Zhehan ဟာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Yasukuni Shrineစစ်သင်္ချိုင်းမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီးနောက် Weibo အပါအဝင်သူရဲ့အကောင့်များနှင့်အလုပ်များအားလုံးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအသီးသီးဟာ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်၊
Zhang သည်ပြီးခဲ့သည့်လကအလားတူ ဖျက်သိမ်းမှုကိုခံရပြီးသူမ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အွန်လိုင်း‌ ပေါ်က ဖော်ပြချက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊
သောကြာနေ့ကမင်းသမီး Zheng Shuang သည်ပေကျင်းကိုစော်ကားခဲ့ပါတယ်၊ သူမဟာ အခွန်ရှောင်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံရပြီးဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၆၃ သန်းပေးဆောင်ရန်အမိန့်ပေးချခံရပါတယ်၊ သူမသာ ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရင်သူမကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှာမဟုတ်သလို သူမရဲ့ ပရိုဖိုင်ကိုပင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်၊
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နှောင်းပိုင်းကသူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝအ‌ကြောင်း ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံနှံ့ခဲ့ပြီးနောက် Zheng ရဲ့အလုပ်အကိုင်အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်၊ သူမရဲ့လက်တွဲဖော်ဟောင်းကသူမကိုအမေရိကန်မှာအငှားကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးနှစ် ဦးအား စွန့်ပစ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်၊ ထို့နောက် Zheng သည်လူအများရှေ့မှ လေးလကြာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်၊
နာမည်ကြီးအဆိုတော် Huo Zhun ဟာလည်း မဖွယ်မရာအပြုအမူကြောင့်လူသိရှင်ကြားတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် မကြာသေးမီကရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ယခုလအစောပိုင်းတွင် တရုတ်-ကနေဒါအဆိုတော် Kris Wu သည်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်အသက်မပြည့်သေးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွပ်စွဲချက်များဖြင့်တရားစွဲခံနေရပါတယ်၊
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်“ fan circle member” ဖြစ်သူ Eunice Zhang ကသူမဟာ သူမရဲ့ idols များကိုခုခံကာကွယ်ရန်အတွက် နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ဖြုန်းလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်၊
“ အရင်တုန်းကငါ့ရဲ့ idol တွေက ပစ္စည်းသစ်တွေကြေညာရင် (သူတို့ထုတ်ကုန်တွေဝယ်ဖို့) ငါ့ပိုက်ဆံအကုန်လုံးကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်” လို့သူမ ပြောခဲ့တယ်၊ “ဒါပေမယ့်အခုငါအသုံးဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုပဲ ဝယ်လိုက် တော့တယ်”
တရုတ်ဆင်ဆာအဖွဲ့က အရာအား လုံးအတွက် ကိုသေသေချာချာကိုစီစဉ်နေကြပါတယ်၊
အစိုးရက ထိန်းချုပ်ထားသော နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာက နာမည်ကျော်တဦးဖြစ်လာစေရန်” မြေတောင်မြှောက်ပေးမည်”၊”ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းရမယ်”၊” လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့ သူတွေဟာ ဆုရမယ်” စတဲ့ သတင်းတွေရဲ့ လူသိများအောင်လုပ်ပါတယ်၊
ယခုလအစောပိုင်းကဘဏ္ဏာရေးရာဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး၌ ဥက္ကဋ္ဌရှီကိုယ်တိုင်ကွန်မြူနစ်တန်ဖိုးအတွက်တရုတ်ရဲ့ကတိကဝတ်ကိုပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်၊သူက“ သာယာဝ‌ပြောခြင်းသည်လူအများစုရဲ့ ချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ဘဲလူအနည်းငယ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်း” ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်၊
“သာယာဝပြောရေးဟာ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်နှင့်တရုတ်ပုံစံ ခေတ်မီတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ”လို့ ဆိုပါတယ်၊ “ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲ့အခြေခံမူတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုတယ်၊ အဓိကငွေကြေးဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်တားဆီးရေးနဲ့ဖြေရှင်းရေးကိုညှိနှိုင်းဖို့လိုတယ်”
ဥက္ကဋ္ဌရှီ က လွတ်လပ်သောဘီလျံနာများအားအန္တရာယ်နှင့်ညီမျှတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြီးထွားလာခြင်းဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေးသတင်းကို သက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေပါတယ်၊
ဒါပေမယ့်စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုကို စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းသစ်တွေချမှတ်ထားတဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အာဏာအတွက် ခြိမ်းခြောက်‌မှုအဖြစ် မြင်နေကြပါတယ်၊
ဇူလိုင်လတွင်နည်းပညာကုမ္ပဏီ Tencent ပိုင်ရှင် Ma Huateng သည် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှု ကြောင့်ဒေါ်လာ ၈၂ ဘီလျံမှ ဒေါ်လာ ၆၈ ဘီလျံသို့ကျဆင်းသွားတာ ကို တွေ့မြင်ရပါတယ်၊
သူတစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ဘီလျံနာ Jack Ma ဟာ သူ့ရဲ့ Ant Group အားအများပြည်သူထံဝေမျှမှုကို တားဆီးခံရပြီးနောက် လူထုဘဝမှပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်၊ နည်းပညာကဏ္ဍတိုးတက်မှုကြီးထွားမှုကိုမတားဆီးနိုင်သောကြောင့် Ma သည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအားပြိုင်မှုများကိုမဝေဖန်ဝံ့ဘဲထိုနှိမ်နင်းမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်၊
ဒါဟာအံ့သြစရာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဥက္ကဋ္ဌ ရှီ သည် ၂၀၁၇ တွင်ဒုတိယအကြိမ်အာဏာပြန်ရသောအခါ“ အလွန်အမင်းကြွယ်ဝမှု” ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်ကတိပေးခဲ့ပါတယ်၊ သို့သော်“ ဝင်ငွေများကိုအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ” ပြုလုပ်ရန်တရားဝင်ကတိပြုရန် ယခုလ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမတိုင်မီအထိကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်၊
ဇူလိုင်လတွင်တရုတ်စိုက်ပျိုးရေးသူဌေးကြီး ဆွန်ဒါဝူဟာ စကားများရန်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပြဿနာကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းတို့ဖြင့်ထောင်ဒဏ် ၁၈ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်၊ သူဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့ပါတယ်၊
Previous Article လုံခွုံရေးပိုငျးအားနညျးမှုကွောငျ့ အာဖဂနျရာဇဝတျ သားတှကေို လယောဉျပျေါချေါတငျခဲ့မိတဲ့ ဂြာမနီ
Next Article ကုမ်ပဏီကွီးလေးခုမှမဟုတျတဲ့ နာမညျအကွီးဆုံး K-Pop Girl Group (၂၅) ခု